Sidee Loola Dhaqmaa Caruurta Madaxa Adag? - Daryeel Magazine
Canaadka iyo madax adaygu maahan wax ilmuhu ku dhasho, sida ay hooyooyinka qaarkood uqaataan, laakiin isbedel nafsiyaded ee ilmaha lagu arko, kadib dhaqamo khaldan oo barbaarineed ee lagula kacay ilmaha.
Ilmaha madax adayga lagu arko waa kuwa caqliga badan isla markaasna leh shakhsiyada fiican.
-Aargoosi jacayl, ma ku cafinayo
Waa in waalidku ogaadaan in isbedelkaan yahay mid dhinacna ka fiican, dhinacna dhibkiisa leh, marka waa inaad ku sabirtaan, oo aad ka joojisaan dagaalka iyo rabshada.
Ilmaha canaadka iyo madaxa adag, waxay waalidka faaiido u tahay xilliga uu gaaro kureynimada ma raaco saaxiibo noocay doonaan ha noqdeene, wuxuuna caan ku yahay intuu nool yahay inuusan saaxiibadu saamayn, waa nooc dadka lagu arko.
9- hurdada waa in la siiyo cuntooyin protein leh, sida hilib jilicsan, ukun, iyo caano.
14- ciyaar badan geli, ama ha la kaxeeyo, ilaa uu ka daalo, ama uu gaajoodo, cunto fiicana ha la siiyo, kadibna wuu seexanayaa.
15- wareyso oo dhagayso, oo dareensii muhiimadi siin badan, koolkooli.
Trainer Jamaludin Awke
Sidee Caruurta Loogu Barbaarin karaa Akhriska? Sidee Caruurta Loo Jeclaysiin Karaa Wax Akhriska? Weligaa Ilmahaaga Ha U Garaacin Khalad U Sameeyay!!! SIDEE CARUURTA LOO SIXI KARAA? Hababka Ugu Toosan Ee Dadka Loola Dhaqmo